ငံပြာရည်နှင့်အတူမီးဖို၌ Hedgehog - တစ်ဦးမုန့်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ်အတွက်ဆန်သို့မဟုတ် buckwheat နှင့်အတူ minced အသားကနေချက်ပြုတ်နည်းများ,
မီးဖို၌ Hedgehog - သား၏အ menu ကိုများအတွက်မူရင်းစိတ်ကူးများ
မီးဖို၌ Hedgehog - လူအတော်များများအိမ်ရှင်မ, အသေးစားကလေးများရှိသူတို့သည်အထူးသဖြင့်ချက်ပြုတ်ဖို့ကိုချစ်ကြောင်းတစ်ပန်းကန်။ သူတို့ဟာ meatballs တူပေမယ့်အဓိကခြားနားချက်ချက်ပြုတ်ဖုတ်-တစ်ဝက်နှင့် uncooked ဆန်မဟုတ်ပါဘူးများအတွက်အသုံးပြုကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဟင်းလျာများသင့်ရဲ့အထူးအရသာရရှိရန်ကူညီပေးသည်။
ဇွန်းတစ်ဝိသေသအင်္ဂါရပ်အစားအသောက်နှင့်ချက်ပြုတ်နည်းပညာ၏လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများရှိနေခြင်းကြောင့်ယင်း၏အသုံးဝင်သောဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်ကြသည်။ အစားအစာကြောင့်အကြီးအပျြောအပါးနှငျ့စားသောသူငယျရှယျကလေးမြားအတှကျရည်ရွယ်သည်, တစ်ဦးဓါတ်စဉ်းစားသည်။ ထို့ကြောင့်မီးဖိုတဖို၌များစွာသောမိခင်တွေလည်း Hedgehog အကျိုးစီးပွား, ဟင်းလျာများစာရွက်တဦးတည်းမြှောင်ကနေအခြားမှအောင်မြင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဟင်းချက်ညွှန်ကြားချက်နေသောခေါင်းစဉ်:
ဒါကြောင့်မူရင်း pudding စေသည် "၌ဆူးပင်ကိုဖြန့်ချိ" ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ကထွက်ပန်းကန်ဖုတ်အတွက်ကုန်ကြမ်းဆန်များအသုံးပြုခြင်း, ကြောင့်။
အရည်ရွှမ်းနှင့်ရွှဲမုန့်, ထောပတ်, ခရမ်းချဉ်သီးဖြစ်နိုင်သည်သောငံပြာရည်, ပေးပါ။ သူတို့ကမုန့်ဖုတ်ရှေ့တော်၌ထိုမီးဖိုတဖို၌ Hedgehog သွန်းလောင်းလေ၏။
ဒါဟာအရည်ရွှမ်းပေးကြဖို့ဘောလုံးကိုရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာကွက် Mayonnaise လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မီးဖို၌ဆန်နှင့်အတူ minced အသား Hedgehog
ဟင်းလျာများ၏ undoubted အားသာချက်ကသူ၏ချက်ပြုတ်၏အမြန်နှုန်းနှင့်ရိုးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏အနိမ့်ဆုံးနှင့်အတူ, သင်ရနိုင် ဆန်နှင့်အတူ Hedgehog ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကလူတိုင်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသောမီးဖိုတဖို၌, နှင့်လူကြီးများနှင့်ကလေးများနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ကိုချစ်၏။ minced အသားအဘို့, အသုံးပွုနိုငျတစ်ဦးချင်းအရသာနှင့်အညီရွေးချယ်ထားသည့်: ဝက်သား, အမဲသားသို့မဟုတ်ကြက်သားမုန့်ညက်အညီအမျှကောင်းစွာမည်။
mince - 0.5 ကီလိုဂရမ်;
ပုံ - 1 tbsp; ။
ကြက်သွန်နီ - 1 pc; ။
မုန်လာဥနီ - 1 pc ။
အဆိုပါဆေးကြောဆန်, ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူ minced အမဲသားကိုရောမွှေပါ။
တစ်ဦး preheated မီးဖို Hedgehog 1 နာရီအတွင်းဖုတ်။
တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပန်းကန်အထူးသဖြင့်အမှတ်ရစရာများနှင့်စပ်အောင်သေချာလျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှိပါတယ်။ ထိုသို့မုန့်များ၏ထို့အပြင်ဖြင့်လုပ်သောငံပြာရည်နှင့်အတူမီးဖို၌ဖော်ပြခဲ့တဲ့နှင့် Hedgehog နိုင်ပါသည်။ ဤသည်ငံပြာရည်အမှန်တကယ် ပြော. မကုန်နိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှု, pudding ဖန်တီးနှင့်စာသားသင်၏နှုတ်၌အရည်ပျော်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မူကွဲအမျိုးမျိုးကိုရောက်စေဖို့ကူညီပေးသည်သောအချဉ်မုန့်နှင့်ခရမ်းချဉ်သီးပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ - 1 pc; ။
ဆန် - 0.5 ခွက်;
ကြက်ဥ - 1 pc; ။
အချဉ်မုန့် -3tbsp ။ ဌ။
ရေ - 1.5 ခွက်;
မုန့်ညက် - 1 tbsp ။ l ။
လူအားလုံးတို့သည်ရောနှော, ကြက်ဥ, ဆားထည့်ပါ။
ဘောလုံး dazzle ။
ငံပြာရည် Make: မုန့်, ရေ, ဆား, ငရုတ်ကောင်း, မုန့်ညက်ရောမွှေပါ။ သူတို့ကိုဘောလုံး Drizzle ။
50 မိနစ် preheated မီးဖိုတဖို၌ဖုတ် Hedgehog ။
ဝက်အူချောင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအပွောငျးအလဲသုံးပြီးဟင်းလျာများချက်ပြုတ်, လူကြိုက်အများဆုံးတွေထဲကခရမ်းချဉ်သီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သည်များစွာသောလူကြီးများနှင့်ကလေးများမှအယူခံလိမ့်မည်ဟုသူဌေးအရသာနှင့်အတူမီးဖို၌ minced အသား၏ Hedgehog get ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ မဆိုမြေပြင်အသားနှင့်အတူကောင်းစွာခရမ်းချဉ်သီးနှင့်အတူ: ကဝက်သား, အမဲသားသို့မဟုတ်ကြက်သားဖြစ်နိုင်သည်။ ခရမ်းချဉ်သီးဟာဟင်းလျာများ၏အရသာကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဘောလုံးလုပ်ဖို့ကဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။
mince - 500 ဂရမ်;
ခရမ်းချဉ်သီး - 1 pc; ။
ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ - 1 tbsp ။ ဌ။
ရေ - 1 ခွက်ကို။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဟာ stuffing မှထည့်ပါ။
တစ်ဦးကိုရေ၌ပျော်သောမီးဖိုတဖို၌ Hedgehog များအတွက်ငံပြာရည်, ခရမ်းချဉ်သီးငါးပိ, ဆား Make ပုတီးသွန်းလောင်း။
မီးဖို၌ Hedgehog ကြက်သား
ကြက်သားအသားအထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သောဖြစ်စဉ်းစား, ဒါကြောင့်မီးဖို၌ minced ကြက်သား၏ Hedgehog, လွှာချက်ပြုတ်သည်အစားအသောက်များတွင်မှလိုက်နာရန်လူတို့တွင်အလွန်လူကြိုက်များကြသည်။ ထိုသို့သောဘောလုံးငါ၏အနည်းနည်းမိခင်မငြိမ်မသက်လှုပ်ရှားခြင်းအဘို့အချက်ပြုတ်ဖို့ချစ်ကြတယ်။ အဆိုပါပေါင်းဘက်တွင်ဟင်းလျာများချက်ပြုတ်၏ဖြစ်စဉ်ကိုအစွန်းရောက်ရိုးရှင်းခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အချိန်အခါမရွေးလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပါဝင်သည်။
mince - 1 ကီလိုဂရမ်;
ဆန် - 1 ခွက်ကို;
ကြက်သွန်နီ -4PCs; ။
ဆန်, ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူ minced အမဲသားကိုရောမွှေပါ။
မီးဖို Hedgehog 1 နာရီဖုတ်။
တစ် - ဘက်ပန်းကန်နှင့်အတူအဓိကသင်တန်းစားရန်ပိုနှစ်သက်သောသူတို့အဘို့, သူတို့ရဲ့အရသာ fit ပါလိမ့်မယ်တဲ့အကြီးအ option ကိုလည်းမရှိ အာလူးနဲ့ဖြူကောင် မီးဖို၌။ ရလဒ်ကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောအစိတ်အပိုင်းများပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်လေးတွေအဘို့အဒါပေမယ့်လည်းမိသားစုတစ်စုလုံးအဘို့မသာနှင့်လျော်ညီသော, တစ်အရသာနှင့်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာနေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာရနိုင်။ တစ်ချိန်က pudding မျိုးစုံမြည်းစမ်းပြီးနောက်ကြောင့်နောက်တဖန်ချက်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်။
mince - 300 ဂရမ်;
သင်္ဘောသဖန်းပင် - 100 ဂရမ်;
အာလူး - 4-5 PCs; ။
ဒိန်ခဲ - 100 ဂရမ်
အဆိုပါအမဲသားများတွင်ကြက်သွန်နှင့်ကြက်ဥ, ဆား, ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါ။
universal တဒိန်ခဲနှင့်အတူမီးဖိုတဖို၌ဖုတ်တစ်ပန်းကန် Hedgehog ချင်ပါတယ်။ အရသာဒိန်ခဲအပေါ်ယံလွှာခဲဖွယ်စားဖွယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလုပ်က piquancy ပေးပါ။ သငျသညျကြက်သားကိုသုံးပါလျှင်၎င်းသည်အစားအသောက်များတွင်အတိုင်းလိုက်နာသောလူများအတွက်စံပြ option ကိုရလိမ့်မည်။ Pudding တစ်မိသားစုနေ့လည်စာသို့မဟုတ်ညစာအဘို့မသာအသုံးပွုနိုငျ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ဧည့်သည်များဆက်ဆံဖို့။
ဒိန်ခဲ - 150 ဂရမ်;
2 လေးညှင်းပွင့ - ကြက်သွန်ဖြူ။
ဆန်, ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူရောမွှေပါ။
မုန့်ဖုတ် အသား Hedgehog 1 နာရီမီးဖို။
ခြစ်ဒိန်ခဲနှင့်အတူဖြန်းပိတ်ပစ်မတိုင်မီ 10 မိနစ်။
မီးဖို၌ buckwheat နှင့်အတူ minced အသား Hedgehog
ဒီမူရင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအစဉ်အလာဆန်ကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများ buckwheat များအတွက်အစားထိုးသည်အဘယ်မှာရှိမီးဖိုအတွက်အရသာ Hedgehog ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအစာစားအလေ့အထမှာမတူကွဲပြားမှုတွေဆောင်တတ်၏ကူညီ အသုံးဝင်သောအစားအစာကလေးတစ်ဦးအစာကျွေးဖို့ ဂျုံယာဂု၏ပုံစံအတွက် buckwheat စားရန်ငြင်းဆန်သောသူ။ ချက်ပြုတ်၏ရိုးရှင်းများနှင့်လွယ်ကူခြင်းမှန်မှန်စားပွဲမှဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သော, ဒီ pudding ပါစေ။
mince - 800 ဂရမ်;
buckwheat - 150 ဂရမ်;
မုန့် - 400 ml ကို။
အဆိုပါ buckwheat ချက်ပြုတ်။
buckwheat အတူ minced အမဲသားကိုရောမွှေပါ။
အချဉ်မုန့်ဆား, ငရုတ်ကောင်း, သူမ၏ပုတီးသွန်းလောင်း။
Gelatin ၏ worms
ပန်းဂေါ်ဖီ fritters - မူလဟင်းလျာများ၏ရိုးရှင်းပြီးအရသာချက်ပြုတ်နည်းများနေ့တိုင်း
မီးဖုတ်ထားသောရွှေဖရုံသီးမြန်ဆန်အရသာ - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မီးဖို၌ငှက်ပျော pudding နှင့်အတူအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ - စာရွက်
သားသမီးတို့အဘို့ Hypoallergenic အစားအသောက်များတွင်
Pruning Currant နွေဦး
အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် oatmeal အစားအသောက်များတွင် - menus တွေနှင့်ဆုံးအရသာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများ
တစ်ဦး tile မီးဖိုစည်းကြပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဘယ်အရာကို soleplate ပိုကောင်း?
ဝက်အူချောင်းနှင့်အတူ Solyanka - တစ်ရိုးရှင်းစာရွက်ချစ်ဘွယ်သောလက္ခဏာ
Hematogen - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး
မွေးနေ့မိန်းကလေးကအရမ်းစိတ်ဆိုးနေသောဒစ္စနေးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူအသက် 30 မုန့်,!